विचित्र संसार Archives - बडिमालिका खबर
डाक्टरको घिनलाग्दो हर्कत ! यसरी बने ९४ बच्चाको पिता
डाक्टरलाई मानिसहरु भगवानको रुपमा लिन्छन्, किनकी डाक्टरले मानिसको ज्यान बचाउँछन् । तर कतिपय डाक्टर यस्ता ठग हुुन्छन् र कुकृत्य गर्दछन् कि कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । अमेरिकामा एकजना डाक्टरले धोकापूर्ण तरिकाले धेरैजना महिलाहरुलाई गर्भवती बनाएर ९४ जना बच्चाको पिता बनिसकेका छन् । ती डाक्टरको शुक्रकिटबाट जन्मिएका थप बच्चाहरु समेत हुनसक्ने र सबैको खुलासा हुन […]
चन्द्रमाको माटोबाट अक्सिजन बनाउने चीनको योजना
मानिस चन्द्रमामा धेरै दिनसम्म बस्न सकोस् भन्नका लागि चीनले तयारी सुरु गरेको छ । चीनको नानजिङ विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूको एक टिमले चन्द्रमाको माटोबाट अक्सिजन बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । शोधकर्ताहरुका अनसार चन्द्रमाको माटोको प्रयोग गरेर चन्द्रमामा लामो समयसम्म बस्न सकिन्छ । किनकि चन्द्रमाको माटोबाट अक्सिजन तथा इन्धन जस्ता संशाधन उत्पादन गर्न सकिन्छ । सन् २०२१ […]
टिकटकप्रति मानिसहरूको आशक्ति कतैबाट लुकेको छैन । टिकटकर हरुले थरीथरीका भिडियोहरू बनाउन जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । तर अहिलेसम्म कुनै पनि टिकटकरले गर्न नसकेको काम समान्था क्रिस्टोफोरेटीले गरेकी छिन् । समान्था अन्तरिक्षमा टिकटक बनाउने पहिलो व्यक्ति बनेकी छिन् । युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीकी अन्तरिक्षयात्री समान्थाले हालै अन्तरिक्षमा पहिलो टिकटक भिडियो बनाएकी छिन् । उनले अन्तरिक्षमा […]
कुखुराका हत्याले पूरै सहर स्तब्ध, आरोपी प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाहीको माग
अमेरिकाको मिसिसिपीस्थित एक सानो सहरमा हालै एउटा कुखुराको हत्या भयो । कुखुराको हत्यासँगै १८ हजार जनसंख्या भएको सहरमा तहल्का मच्चियो । पूरै सहर स्तब्ध भयो । एकजना पुलिस अधिकारीमाथि कुखुरा हत्याको आरोप लाग्यो । कुखुराको हत्या गरेकी ती महिला प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न सहरवासीले माग गरेका छन् । भालेको नाम कार्ल थियो । सो कुखुरा […]
तीन सन्तान जन्माउनेलाई गज्जबको अफर : १८ लाख पुरस्कार, १ वर्ष छुुट्टी
कतिपय कम्पनीहरू आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको हितका लागि विभिन्न नयाँ-नयाँ नीति तथा योजनाहरु ल्याउने गर्दछन् । एउटा कम्पनीको यस्तै नीति आजकल निकै चर्चामा छ । उक्त कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तिनवटा बच्चा जन्माउनका लागि प्रोत्साहित गरिरहेको छ । यदि कुनै कर्मचारीले तेश्रो बच्चा जन्माएमा उसलाई करिब १८ लाख रुपैयाँ पुरस्कार मात्र होइन एक वर्षको छुट्टी दिने […]
यस्तो कम्पनी जसले कर्मचारीको जीवनसाथी खोजिदिन्छ, बिहेपछि तलब बढाउँछ
भारतको तमिलनाडुमा एउटा यस्तो सूचना प्रविधि कम्पनी छ जसले आफ्ना कर्मचारीहरूको जागिरसँगै उनीहरूको पारिवारिक योजनाको पनि जिम्मा लिइरहेको छ । उक्त कम्पनीले आफ्ना अविवाहित कम्पनीका लागि बेहुला बेहुली खोजिदिने समेत काम गर्दछ । साथै बिहे पश्चात् कर्मचारीको घर गृहस्थी बसाउने जिम्मेवारी पनि कम्पनीले लिने गरेको छ । गज्जब त के भने आफूकहाँ कार्यरत कर्मचारीको बिहे […]
काठमाडौं — यदि तपाईं कारको शौखिन हो वा कारका विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ भन्ने कुनैदिन अवश्य पनि सोंच्नुभएको होला कि संसारको सबैभन्दा ठूलो वा लामो कार कुन हो भनेर । संसारको सबैभन्दा लामो कार कस्तो देखिएला ? यसमा कतिजना मानिस बस्न सक्दछन् होला तथा त्यो कारमा कस्ता–कस्ता सुविधा हुन्छन् होला ? भन्ने जिज्ञासा पनि अवश्य हुन्छ […]
यदि तपाईं कारको शौखिन हो वा कारका विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ भन्ने कुनैदिन अवश्य पनि सोंच्नुभएको होला कि संसारको सबैभन्दा ठूलो वा लामो कार कुन हो भनेर । संसारको सबैभन्दा लामो कार कस्तो देखिएला ? यसमा कतिजना मानिस बस्न सक्दछन् होला तथा त्यो कारमा कस्ता–कस्ता सुविधा हुन्छन् होला ? भन्ने जिज्ञासा पनि अवश्य हुन्छ । वास्तवमा […]
पसलेको अनौठो अफर, मोबाइल किन्दा कागती र पेट्रोल फ्री
काठमाडौं — अहिले प्रायः सबैजसो उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । अझ त्यसमा पनि कागतीको भाउ त छोइनसक्नु छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । आम मानिसलाई महंगीले थिचिरहेको बेला व्यापारीहरु भने आफ्नो व्यापार प्रवर्द्धनका लागि अनेक खालका तरिकाहरु अपनाउन छाडेका छैनन् । हालै एक मोबाइल पसलेले आफ्नो पसलका मोबाइल […]
अहिले प्रायः सबैजसो उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । अझ त्यसमा पनि कागतीको भाउ त छोइनसक्नु छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । आम मानिसलाई महंगीले थिचिरहेको बेला व्यापारीहरु भने आफ्नो व्यापार प्रवर्द्धनका लागि अनेक खालका तरिकाहरु अपनाउन छाडेका छैनन् । हालै एक मोबाइल पसलेले आफ्नो पसलका मोबाइल बिक्री गर्नका […]
काठमाडौं — ऐना नहुँदो हो त के हुन्थ्यो होला ! कहिल्यै सोँच्नुभएको छ ? वास्तवमा ऐना सानो चिज भैकन पनि मानव जिवनको अभिन्न हिस्सा भैसकेको छ । हामी कस्तो देखिन्छौँ ? कस्तो देखिन चाहन्छौँ ? आफ्नो स्याहार गर्ने, श्रृंगार गर्ने तथा आफ्नो जिउको तथा अनुहारको ख्याल गर्नका लागि हामीलाई ऐनाले नै सिकाएको हो । तर […]
सुतेको बेला मर्ने डरले रातभर जाग्राम !
डर सबैलाई लाग्दछ, यो स्वभाविक पनि हो । कसैलाई अँध्यारोसँग डर लाग्दछ कि कसैलाई उचाइदेखि । तर बेलायतका एक युवकलाई चाहिं सदैव अनौठो डरले सताइरहन्छ । रातमा गहिरो निद्रा सुत्यो भने बिहानसम्म आफ्नो मृत्यु हुन्छ कि भन्ने डर उनलाई लाग्दछ । यस्तै डरका कारण डेभिड निल सुत्नबाट डराउँदछन् र रातभर जाग्राम बस्ने गरेका छन् । […]
सम्भोगपछि पोथीबाट बँच्न यसरी दौडिन सिक्यो भाले माकुरा
काठमाडौं — माकुराहरुको संसार उनीहरुले बनाउने जालो भन्दा पनि जटिल हुन्छ । एउटा यस्तो प्रजातिको माकुरा हुन्छ जसमा सम्भोगपछि पोथी माकुराले भाले माकुरालाई मारेर खान्छ । अर्थात् भाले माकुराले जुन पोथीसँग सम्भोग गर्दछ, सम्भोग पश्चात् सोही पोथीबाट मारिनुपर्दछ । तर बाँच्ने रहर कसलाई पो हुँदैन र ? सम्भोगको बदलामा आफ्नो ज्यानै पोथीको आहारा बनाउनुपर्ने दर्दनाक […]
संसारमा एउटा यस्तो घर छ, जसलाई सबैभन्दा सुनसान घर भनेर चिनिन्छ । अमेरिकाको वोहोआ बे स्थिति Duck Ledges टापुमा एक्लै रहेको उक्त घर डेढ एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । बोल्डकोस्ट प्रोपर्टिजका एजेन्स बिल्ली मिलिकेनको स्वामित्वमा रहेको उक्त एक बेडरुमवाला घर बिक्रीमा राखिएको छ । सन् २००९ मा बनेको उक्त घर सानो भए पनि वास्तवमै आलिशान […]
हिन्दु धर्मावलम्बीहरू भ्गवानको पूजा आराधना तथा दर्शन गर्नका लागि मन्दिरमा जान्छन् । मन्दिरमा हुने देवी देवताका मूर्तिमा फूल, अक्षता तथा प्रसाद अर्पण गरी पूजा गरिन्छ । तर संसारमा एउटा यस्तो रहस्यमय मन्दिर छ जहाँ भगवानलाई हेर्न वर्जित छ । उक्त मन्दिरमा पुजा आराधना गर्न जाने भक्तजनहरुले आँखामा पटि्ट लगाएर पुजा गर्दछन् । भारतको उत्तराखण्डस्थित चमोली […]
यी हुन् संसारकै अग्ली महिला, जसको नाममा छन् ३ विश्व रेकर्ड
संसारमा जति पनि मानिसहरू छन् सबै फरक-फरक छन् । सबै मानिसको शरीरको बनावटसँगै अन्य कुराहरू पनि फरक हुन्छन् । कोही मानिस मोटो त कोही दुब्लो हुन्छन् । कोही अग्लो त कोही होचो हुन्छन् । कसैको दिमाग तेज हुन्छ त कोही अन्य कुरामा चतुर हुन्छन् । रुमेसा गेल्गी नामकी महिला संसारकै सबैभन्दा अग्ली महिला हुन् । […]
कहिले ढल्छ पिसाको ढल्केको धरहरा ? यस्तो छ रोचक कथा
इटालीमा रहेको पिसाको ढल्केको धरहरा पर्यटनको केन्द्र हो । उक्त ढल्केको धरहरा हेर्नका लागि बर्सेनि लाखौं मानिस त्यहाँ पुग्दछन् । त्यो विचित्र धरहरा वास्तवमै रहस्यले भरिएको छ । सदियौंदेखि त्यो धरहरा त्यसरी नै ढल्केको छ । तर गुरुत्वबलको विज्ञान तथा सामान्य नियमलाई समेत चुनौती दिंदै यो धरहरा कहिलेसम्म यसरी नै ढल्किएर रहला ? यो धरहराको […]
यी हुन् संसारकै ठूलो मुख भएकी महिला
मानिसको अनुहार तथा मुखको संरचना सबैको फरक-फरक हुन्छ । आँखा, नाक, कान तथा मुख सबैका फरक-फरक हुन्छन् । कसैको मुखको आकार ठूलो हुन्छ त कसैको सानो । तपाईंले पनि कतिपय ठूलो मुखधारी मानिसहरू देख्नुभएको छ होला जसले ठूलै चिज पनि एकैपटकमा क्वाप्लाक्क खाइदिन सक्दछन् । सायद तपाईंले यस्तो मान्छे देख्नुभएको छैन होला जसको मुख यति […]
महिलाको अनौठो सोख, भान्साकोठामा ५० मुसाको लालनपालन
काठमाडौं — कतिपय मानिसको रुचि नै अनौठो खालको हुन्छ । केही मानिसको जनावरप्रति निकै ठूलो लगाव हुन्छ । घरमा कुकुर, बिरालो जस्ता साथी जनावर पाल्ने सोख हुने मानिसहरु अधिकांश हुन्छन् । कतिपयले विभिन्न चराचुरुंगी पनि पालेका हुन्छन् घरमा । तर एकजना महिला यस्ती छिन् जसले आफ्नो घरको भान्सा कोठामा ५० वटा मुसा पालेकी छिन् । […]
एलन मस्कलाई श्रीलंका किन्न सुझाव
काठमाडौं — टेस्ला तथा स्पेस एक्स कम्पनीका सीईओ एलन मस्क संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् । मस्कले हालै सोसल मिडिया कम्पनी ट्वीटरको करीब १० प्रतिशत शेयर खरीद गरी कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो शेयरहोल्डर बनेका छन् । त्यतिमात्र होइन मस्कले ४३ अर्ब डलरमा पूरै ट्वीटर कम्पनी नै खरीद गर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् । मस्कको उक्त प्रस्तावका […]